Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Gunyana 02, 2020
Gunyana 02, 2020
Bazi rezvehutano rakazivisa nezuro kuti huwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere cheCovid-19 hwakasvika pamazana maviri nevatatu, kana kuti 203, mushure mekushaya kwemunhu mumwe chete nezuro wakare.
Zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevana vari kuberekwa pachipatara cheChinhoyi Provincial Hospital vanonzi vari kuberekwa nguva yavo isati yakwana.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, vanopihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inosvika makumi mashanu ezviuru zvemadhora emaRTGS, kana kuti 50,000 RTGs, uye vanonzi vashandise social media.
Ukuwo mutori wenhau, Hopewell Chin’ono, apihwa mukana wekubvisa zviuru gumi zvemadhora, kana kuti 10,000 RTGS, semari yechibatiso
Vaimbove varwiri vehondo yerusununguko votashurana pamusoro pehutungamiri hwesangano ravo vamwe vachiti havachina chivimbo nahwo.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemudzidzisi ari muno muAmerica pamusoro pehurongwa hwekudzidza nekudzidzisa hwakatangwa nezvikoro zvakawanda muno kotoro ino huchiitwa pamadandemutande, kana kuti virtual classroom.
Aimbotambira maWarriors uyezve akabatsira Dynamos kupinda mufainari ye1998 Caf Champions League, Harlington Shereni, anoti vatambi vemaWarriors vanofanira kuisa pfungwa dzavo dzese pamitambo yavo vozochema zvemari kana vapedza basa ravanenge vapihwa.